3 Ɛno akyi no, Hiob buee n’ano, na ɔdomee ne da.+ 2 Nea Hiob kae ni: 3 “Ma ɛda a wɔwoo me no nyera,+Ɛne anadwo a obi kae sɛ, ‘Wɔanyinsɛn ɔbabarima’ no! 4 Saa da no, ma ɛnnan sum.Mma Onyankopɔn mmfi soro nnhwehwɛ akyi kwan,Mma adekyee hann nso nnhyerɛn wɔ so. 5 Ma esum ne esum kabii nnye mfa.Ma omununkum ntena so.Ma nea ɛma adekyee duru sum nhunahuna no.+ 6 Saa anadwo no—ma esum kabii mfa;+Mma ennnya anigye wɔ afe nna no mu;Mma wɔnnkan mmfra asram dodow no. 7 Hwɛ! Saa anadwo no—ma ɛnyɛ obonin;Mma wɔnnto ahurusi dwom biara wom.+ 8 Ma wɔn a wɔdome ɛda mmɔ no dua,Wɔn a wɔhwanyan ɔdɛnkyɛm*+ no. 9 Ma ahemadakye nsoromma nnuru sum;Ma ɛntwɛn hann nanso mma ɛmmma;Mma adekyee hann mmpue wɔ so. 10 Efisɛ antoto me maame yafunu apon mu,+Enti anyi ɔhaw amfi m’ani so. 11 Dɛn nti na manwu ɔyafunu mu?+Dɛn nti na mifi yafunu mu reba no, mannyaa mu? 12 Dɛn nti na nkotodwe behyiaa me,Na minyaa nufu+ numii? 13 Anka saa bere yi mada ma me ho adwo me;+Anka mada; anka meregye m’ahome;+ 14 Me ne ahene ne asase so afotufo,+Wɔn a wɔkyekye amamfõ fa,+ 15 Anaa me ne atitiriw a wɔwɔ sika,Wɔn a wɔde dwetɛ hyehyɛ wɔn afie mã; 16 Anaa te sɛ ɔba a wɔapɔn no ahintawee mu+ no, anka mamma,Te sɛ nkokoaa a wɔanhu hann da.+ 17 Ɛhɔ na nnebɔneyɛfo haw nni bio,+Ɛhɔ na wɔn a wɔn ahoɔden asa home.+ 18 Nneduafo nyinaa te hɔ dwoodwoo;Wɔnte nea opiapia wɔn kɔ adwuma+ no nne. 19 Ɛhɔ na nnipa akɛse ne nketewa nyinaa yɛ pɛ,+Na akoa ade ne ho afi ne wura nsam. 20 Dɛn nti na Onyankopɔn de hann ma ɔmanehunufo,Na ɔde nkwa ma wɔn a wɔn kra abotow?+ 21 Dɛn nti na ebinom twɛn owu nanso ɛmma,+Bere a wɔbɔre hwehwɛ no kyɛn akorade a ahintaw? 22 Wɔn a wɔn ani gye boro so no,Wonya anigye kɛse efisɛ wonya ɔdamoa. 23 Dɛn nti na Onyankopɔn de hann ma ɔbarima a wɔde ne kwan ahintaw,+A Onyankopɔn aka no ahyem?+ 24 M’aduan anim na migu ahome,+M’apinisi hwie sɛ nsu;+ 25 Akomatusɛm a misuro no, ɛno na ɛba me so;Na nea ɛyɛ me hu na ɛto me.+ 26 M’asom nnwoo me, na me ho ntɔɔ me,Minnyaa ɔhome, nanso ahoyeraw ba ara.”
^ Hebri mu, “Lewiatan.”